ई-पुस्तक PocketBook 614: समीक्षा
म धेरै पढेर आनन्द, तर तिमीलाई धेरै निःशुल्क समय छैन? तर हामी आफ्नो भोजन ब्रेक वा यातायात जाम मा, सार्वजनिक परिवहन मा, सधैं छ पुस्तक मा एक झलक। यसलाई हार्ड प्रतिलिपि र संकुचित प्रयोगकर्ता-अनुकूल र एक भारी पुस्तकहरू छैन भने यो अझ उपयोगी छ सुविधा-सम्पन्न उपकरणहरू भनिन्छ विद्युतीय पुस्तकहरू। पहिलो, तिनीहरूले किफायती हो, र दोश्रो कुरा, वास्तविक पुस्तकहरू उत्पादन लागि कच्चा माल बचाउँछ तेस्रो, तपाईं कारण स्मृति को ठूलो रकम काम गर्दछ को एक विशाल संख्या काम गर्न अनुमति दिन्छ।
Pocketbook कम्पनी लामो किफायती, अझै उच्च गुणस्तरीय तपाईं जागिर रूपमा साथ लाग्न सक्छ कि ई पुस्तकहरु-को उत्पादन, र लामो यात्रा को लागि प्रसिद्ध छ।
यी पुस्तकहरू एक, र तपाईं सान्त्वना धेरै पढ्न अनुमति दिन्छ, PocketBook 614 (मोडेल साँच्चै उच्च गुणवत्ता र एक किफायती मूल्य मा बनेको छ किनभने यसको बारेमा समीक्षा, मूलतः राम्रो हो) छ। उपकरण केही विशेषताहरु, हामी यसको कार्यक्षमता को आधारभूत विवरण बुझाउन के, पहिचान: यो हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं के हो तागत र कमजोरीहरूलाई।
त्यसैले, हामी डिजाइन, सुरु छौँ सायद। गाढा र हल्का - ई-पुस्तक दुई रंग विषयवस्तुहरू मा खरीदार उपलब्ध छ जो एक सुखद मैट प्लास्टिक, बनेको छ। यो उपकरणमा स्क्रिन bezel प्रदान गरिनेछ यो फारम छ। यो फिर्ता आवरण (यो मिट छैन भनेर, स्पष्ट, यो व्यावहारिकता को विचार गरेर dictated छ) एक गाढा डिजाइन दुवै अवस्थामा प्रस्ताव छ विचारणीय छ।
बारेमा प्रकाश भेरिएसनहरूमा आधारभूत 614 प्रयोगकर्ता PocketBook समीक्षा कारण यो एक विपरीत सिर्जना गर्ने एक प्रकाश प्यानल घेरिएको छ भन्ने तथ्यलाई गर्न खैरो प्रदर्शन नेत्रहीन गाढा भन्छन्। उनको पुस्तक स्क्रिनमा हल्का देखिने र कागज को बनावट सम्झाउने - कसैले यसलाई असहज हुनेछ घटनाको, यो गाढा संस्करण ध्यान निश्चित छ।
मोडेल 614 कुनै पनि अतिरिक्त मोड्युलहरू उपस्थिति होइन प्रकाश, ब्याकलाइटद्वारा को र जस्तै वृद्धि। एक हात मा, यो जो अन्धकारमा पुस्तक काम को संभावना समाप्त, drawback छ। अन्य मा - त्यसको विपरीत, उपकरण सरलीकृत फारम प्रस्ताव छ, र यसैले यसको कम लागत। यो थप्न-मा मोड्युलमा, प्रकाश स्रोत अलग कुनै पनि इलेक्ट्रनिक्स स्टोरमा खरिद गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले "ई-पाठकहरूलाई" सामान लागि रूपमा प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रयोगकर्ता पढिरहेको छ कि पुस्तकहरू मार्फत नेभिगेट, क्लासिकल योजना द्वारा लगे छ। यो केन्द्र कन्सोलमा स्थित एक सर्कल, साथै जो पनि पृष्ठहरू गर्न सक्नुहुन्छ मिसिन को पछाडि, दुई बटन छ। PocketBook आधारभूत 2614 को समीक्षा मा व्यवस्थापन यसको उपयोगिता जोड। सिद्धान्त, यस पुस्तकमा नेभिगेसन intuitively दुवै पुरानो र साना पाठकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
विकासकर्ताहरूले हामी के प्रस्ताव?
त्यसैले दिइएको उत्पादन विकासकर्ताहरूले हामीलाई के दिनुहुन्छ? पहिलो, एउटा इलेक्ट्रोनिक पुस्तक, एक6इन्च स्क्रीन र पर्याप्त ब्याट्री शक्ति संग सुसज्जित छ जो (PocketBook 614 समीक्षा टिप्पणी छ कि यो साथ बाँच्न लागि उपकरण सक्रिय प्रयोग एक महिनाको लागि सक्षम छ)। दोश्रो, ती को3जीबी को प्रस्तावित स्मृति, यन्त्र प्रदान र 32 जीबी एक मेमोरी कार्ड संग थप गर्न सकिन्छ।
सामान्य मा, तपाईं सजिलै पर्याप्त, तिनीहरूले PocketBook 614 (खैरो) समीक्षा के भन्न विश्वास छ भने, यो पुस्तक सञ्चालन गर्न। पछाडिको आवास हात फिट जो एक सुखद अपारदर्शी प्लास्टिक, छ। अगाडि प्यानल चमकदार देखिने (हुनत अलिकति मार्क) सामाग्री एक सजावटी वर्ण भएको।
पुस्तकहरू सयौं डाउनलोड गर्न, र लामो ब्याट्री जीवन स्थिर रिचार्जिंग उपकरणको बारेमा सोच्न छैन मद्दत गर्छ र यो साँच्चै स्वायत्त र मोबाइल बनाउँछ पर्याप्त स्मृति।
, को रियर "पत्रदल" स्विच किन तिनीहरूलाई प्रयोग सधैं सुविधाजनक छ जो एक विशिष्ट ध्वनि, पृष्ठहरूमा नेभिगेसन सुविधाहरू सन्दर्भमा, यो PocketBook 614 बारेमा समीक्षा भने भएको छ। यस मामला मा, प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई प्रयोग गर्न रुचि भनेर सबै कार्यहरू सामना गर्न अगाडि मा स्थित, को घन्टी कुशलतापूर्वक पर्याप्त।
धेरै तरिकामा उपकरण प्राप्त। पहिलो र सबैभन्दा सुविधाजनक -, को पाठ्यक्रम इन्टरनेट छ। अनलाइन, तपाईं सजिलै इलेक्ट्रनिक्स बिक्री पसलहरूमा धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कार्य PocketBook 614 ग्राहक समीक्षा पुस्तकको मूल्य र तिनीहरूले खरिद जहाँ एक पोर्टल संकेत कि मा फेला छ। अर्को, तपाईं बस मा विभिन्न अनलाइन स्टोर ग्याजेट लागत तुलना र कहाँ सस्ता चयन गर्न (को पाठ्यक्रम, पसलमा को प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता ध्यान समानान्तर आवश्यकता मा) आवश्यक छ।
अनलाइन अर्डर साथै सकेसम्म र वास्तविक पसलहरूमा मा ई-पुस्तक खरिद। त्यसैले, हाम्रो सबै भन्दा ठूलो घरेलू विद्युतीय सञ्जाल तपाईं उसलाई काम गर्न प्रयास गर्न, यो स्पर्श गर्न पर्याप्त मूल्य र गुणस्तर सेवा, र आफ्नो हात मा ग्याजेट पकड गर्ने क्षमता प्रदान गर्न, सक्षम हुनेछ। यो स्पष्ट इन्टरनेटमा सञ्चालन स्टोर भन्दा एक महत्वपूर्ण फाइदा छ।
Oysters 7x3जी - बजेट ट्याबलेट, वा "चिनियाँ" सस्तो?
तपाईँको फोन र पीसी लागि हेडफोन प्रकार
स्याउ Ipad 4G, 64GB
हेडफोन: GOST, प्रकार, सुविधाहरू
ट्याब्लेट राम्रो छ? समीक्षा। बच्चाहरु को लागि गोली: के राम्रो छ
ई-पुस्तक के हो र किन आवश्यक छ?
मोडेम 4G: निर्माता को समीक्षा
टायर व्यापार योजना: एक नमूना उदाहरण। स्क्राच देखि एक टायर कसरी खोल्न
तन्त्रमन्त्रमा के हो? तन्त्रमन्त्रमा विज्ञान अध्ययन
यो लेखिएको छ रूपमा "भोक"? शब्द "भोक" प्रमाणिकरण शब्द
अदालत मा ऋण संग्रह लागि दावी कसरी फाइल?
लागि गुडिया Smoby घुमक्कड। कसरी चयन गर्न: वर्णन, सीमा, समीक्षा
Eyebrows छाया - सही छनौट
"नोकिया 808" - 41 मेगापिक्सेलको एक क्यामेरा फोन
शरद ऋतु रानी - जाडो भण्डारणको लागि गाजर
स्मार्टफोन Homtom HT3 प्रो: मालिकको समीक्षा, प्रौद्योगिकी विशेषताहरु र सुविधाहरू
आफ्नो हातले अंधा स्थापना